ओहियो WIC | जेपीएमए, इंक
यहाँ सुरू गर्नुहोस्
यदि तपाइँ WIC मा नयाँ हुनुहुन्छ भने, कृपया तल भिडियो हेर्न सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई WIC स्टाफसँग सम्पर्क गर्न आवश्यक छ भने, कृपया 'WIC क्लिनिक फेला पार्नुहोस्"अनुप्रयोगमा विकल्प वा परिवार स्वास्थ्य हटलाइनलाई कल गर्नुहोस् 1-800-755-GROW (4769). के तपाईँ एपसँग समस्या छ? JPMA मा इमेल गर्नुहोस् WICShopper@jpma.com
फल र सब्जिङ स्क्यान गर्दै
ध्यान राख्नुहोस् कि WICShopper ताजा फल र सब्ज स्क्यान गर्न सक्दैन र कहिलेकाहीँ भण्डारहरूले आफ्नै प्याकेजिङ प्रयोग गर्ने अनुमोदित उत्पादनहरूको सूचीमा प्रयोग गर्दैनन्। तथापि, सबै पुरा, पूर्व कटौती, कटाई या व्यक्तिगत सेवा को आकार बिना सस या डीप्स अनुमति छ। त्यहाँ केही नियमहरू छन्, त्यसैले थप विवरणहरूको लागि एपमा तपाईंको खाना सूचीमा उल्लेख गर्नुहोस्।
Q: मेरो WIC फ्यानहरू कहाँ छन्?
A: दुर्भाग्यवश, WICShopper को लागी तपाइँको WIC फाईलहरू डाउनलोड गर्न सम्भव छैन। हामी निकट भविष्यमा यो सुविधा थप्न आशा गर्छौं। तबसम्म, तपाईं "कैप्चर लाभहरू"तपाईंको रसिदमा WIC ब्यालेन्सको छवि कब्जा गर्न सुविधा। एपले सधैं अन्तिम छवि लिइनेछ, त्यसैले तपाईले पसल गर्नुहुने तस्विरलाई अद्यावधिक गर्न बिर्सनु हुँदैन।
एकपटक तपाईंको खानाको फाइदा तपाईंको कार्डमा लोड भएपछि, तपाईं तुरुन्तै पसल गर्न सक्नुहुनेछ। खाद्य लाभ प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनमा अन्त्य गर्दछ र अर्को महिनामा रोल नगर्नुहोस्।
तपाईंको WIC क्लिनिकमा वा तपाईंको कुनै पनि किराना भण्डार चेकआउट लेनमा तपाईंको WIC खाद्य लाभ सन्तुलन जाँच गर्नुहोस् जुन WNC स्वीकार गर्दछ। आफ्नो कार्ड कार्ड रिडरमा राख्नुहोस् र तपाईंको फायदा सन्तुलन प्राप्त गर्न व्यक्तिगत पहिचान नम्बर (PIN) प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Q: मेरो कार्ड गुमाएको छ, चोरी वा क्षतिग्रस्त हुँदा के गर्नु पर्छ?
A: तपाईंको तस्वीर ID जारी गर्न जारी राख्नुहोस् WIC क्लिनिकमा र यसलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्! तपाईंको हराएको, चोरी वा क्षतिग्रस्त कार्ड प्रतिस्थापन गर्न सक्नु अघि पर्ख अवधि हुनेछ।
Q: मेरो कार्ड बन्द हुँदा के गर्नु पर्छ?
A: यदि तपाईंको कार्डले काम गर्दैन किनभने यो लक गरिएको छ, तपाईं तस्विर आइडीको साथ जारी जारी रहेको वाईआईसी क्लिनिकमा जानुहुन्छ र क्लिनिक कर्मचारीहरूले तपाईंको लागि अनलक गर्नेछ।
Q: म WIC पोषण कार्ड (WNC) संग मेरो WIC फायदा कसरी प्राप्त गर्नेछु?
A: तपाईंको WIC फूडहरू तपाईंको क्लिनिक भ्रमणको समयमा तपाईंको WNC मा लोड गरिनेछ। एक पटक क्लिनिकले तपाईंको WIC फूडहरू तपाईंको कार्डमा लोड गर्दछन्, तपाईं तुरुन्तै पसल गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईं आफ्नो WIC फूडहरू किन्नुहुन्छ, तिनीहरू तपाईंको कार्डमा खानाको सन्तुलनबाट हटाइनेछ।
Q: म कसरी मेरो सन्तुलन थाहा पाउनेछु?
A: तपाईं WICShopper मा "क्याप्चर रसिद" प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक चोटि आफ्नो ई डब्ल्यूआईसी ब्यालेन्स रसिदको छवि खिच्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो ब्यालेन्स आफ्नो WIC क्लिनिकमा र सेवा मेज वा स्टोरमा चेकआउटमा पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
Q: मेरो फाइदा प्रयोग गरिसके पछि मैले मेरो कार्डसँग के गर्नुपर्छ?
A: WNC पुन: प्रयत्नशील छ। तपाईंको WNC बचत गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको नयाँ डाइरेक्ट वस्तुहरू यसमा लोड गर्न तपाईँको अर्को WIC नियुक्तिमा लिनुहोस्।
Q: के भयो भने म मेरो पिन बिर्सन्छु?
A: तपाईं आफ्नो कार्ड रिजल्ट क्लिनिकमा कार्ड रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ।
ओहियो भरमा 200 WIC कार्यालयहरू छन्। तपाईंको नजिकको WIC कार्यालय फेला पार्न:
परिवार स्वास्थ्य हटलाइनलाई कल गर्नुहोस् 1-800-755-GROW (4769)
तपाईले पसल गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो खाद्य ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्।
WIC खाद्यान्नका लागि WICShopper (वा तपाइँको मुद्रित संस्करण) मा तपाईको ओहियो WIC प्राधिकृत फूड्स सूची (एएफएल) प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईले खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
A: एपले ताजा फल र तरकारीहरू स्क्यान गर्न सक्दैन र कहिलेकाहीँ भण्डारहरूले आफ्नै प्याकेजिङ्ग प्रयोग गर्छन्। यद्यपि, सम्पूर्ण सम्पूर्ण, पूर्व-कट, कटाई वा व्यक्तिगत सेवाको आकार बिना सस या डीप्स अनुमति छ। त्यहाँ केही नियमहरू छन्, त्यसैले थप विवरणहरूको लागि एपमा तपाईंको खाना सूचीमा उल्लेख गर्नुहोस्।
चेकआउट लेन प्रयोग गर्नुहोस् जुन WNC स्वीकार गर्दछ। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, एक स्टोर कर्मचारीलाई सोध्नुहोस्।
अन्य वस्तुहरूबाट WIC खानाहरू अलग गर्नुहोस्।
तपाईंको WNC लाई कार्ड रीडरमा राख्नुहोस् जब कैशियरले तपाईंलाई सोध्दछ। तपाईंको चार चार अंकको पिन प्रविष्ट गर्न निश्चित हुनुहोस्। तपाईंको PIN बन्द हुनेछ यदि तपाइँको पिन सात पटक भन्दा बढी भन्दा बढी प्रविष्टि गरिएको छ। यदि तपाईंको कार्ड लकहरू छन् भने, तपाईंले आफ्नो तस्बिर पहिचान (आईडी) लिनु पर्दछ र WIC क्लिनिकमा फर्किनु पर्छ जहाँ तपाईंको कार्ड जारी गरिएको थियो।
जब तपाइँ आफ्नो WNC लाई कार्ड रीडरमा राख्नुहुन्छ र तपाईंको सही PIN प्रविष्टि गर्नुहुन्छ, तपाईंको सुरुवात फाइनान्स ब्यालेंस रसिद प्रिन्ट हुनेछ।
कैशियरले तपाईंको सबै खाना स्क्यान गरेपछि, तपाइँले WIC फूडहरू खरीद गरेको रसीद पाउनुहुनेछ वा तपाईंले खरीद गर्नुभएको WIC वस्तुहरूको डिस्प्ले स्क्रिन समीक्षा गर्न सोध्नुभयो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले खरीद गर्नुभएको वस्तुहरू सूचीबद्ध छन् र मूल्यहरू सही छन्।
कैशियरले तपाईंको लेनदेनको अन्तमा कार्ड रिडरबाट तपाईंको कार्ड हटाउन सुरक्षित हुँदा तपाईंलाई बताउनेछ। यो "डाइ" लाई WIC लेनदेनको वा "नो" लाई अस्वीकार गर्नको लागि "हाँ" थिच्नुहोस्। "हां" थिच्नु भएपछि कुनै परिवर्तनहरू गर्न सकिँदैन।
तपाईंको खरिदको अन्त्यमा, तपाईंलाई कैशियर बाट एक शेष ब्यालेन्स रसिद प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो रसीद राख्नुहोस् ताकि तपाईलाई अर्को मासिक यात्राको यात्राको लागि हालको महिनामा के छोड्नुभएको खाद्य फायदाहरू थाहा पाउनेछन्।
तपाईंको लेनदेनको अन्तमा कार्ड रिडरबाट तपाईंको कार्ड हटाउनको लागि कैशियरले तपाईंलाई बताउनेछ।
तपाईंको कार्डको हेरचाह गर्दै
तपाईंको WNC सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस्। तपाईंको WNC लाई एक क्रेडिट कार्ड वा नगद जस्तै व्यवहार गर्नुहोस्।
तपाईंको पिन सुरक्षित राख्नुहोस्। आफ्नो पिन कसैसँग साझेदारी नगर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो कार्ड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न।
तपाईंको पेस वा बटुलेमा तपाइँको पिन नदिनुहोस्।
मोडा नगर्नुहोस्, आफ्नो कार्डमा काट्नुहोस् वा लेख्नुहोस्। यसलाई सफा र सुखा राख्नुहोस्।
बेच्न, व्यापार नगर्नुहोस् वा तपाईंको पिन दिनुहोस् वा कार्ड दिनुहोस्। WIC लाभहरू दुर्व्यवहार एक अपराध हो।